ကျက်တူရွေးများ ကျီးများ ခိုများ ……. စာမေးပွဲခန်း ၀င်ကြလေပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ကျက်တူရွေးများ ကျီးများ ခိုများ ……. စာမေးပွဲခန်း ၀င်ကြလေပြီ
ကျက်တူရွေးများ ကျီးများ ခိုများ ……. စာမေးပွဲခန်း ၀င်ကြလေပြီ
Posted by naywoon ni on Mar 12, 2013 in Education, My Dear Diary | 15 comments
အားလုံး နေ၀န်းနီကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ……။ အစက ဒီအကြောင်းအရာ ရေးဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူး….။ အတွေးကိုမရှိခဲ့တာပါ…။ မနက်မိုးလင်းလို့ အိမ်အနီး အနားက ကလေးတွေ စာကျက်နေသံကြားတော့ အော်….. မနက်ဖြန် ဆယ်တန်းတွေစာမေးပွဲ ဖြေပြီပဲ လို့ အတွေးရောက်ပြီး
အဲဒိလို ဘာညာ ဘာညာ နဲ့ စာမေးပွဲအောင်မြင်စေကြောင်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရေး ဖို့စိတ်ကူးနဲ့ပါ…။ အဲဒါလေးကို အတွေးနဲ့စာစီရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ “ တဂိုး” ရဲ့ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်က ခေါင်းထဲ မဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာပြီး ရှေ့က အတွေးလေးတွေကို နောက်က လှိုင်းတစ်လုံး ဖုံးလိုက် သလို ဒီခေါင်းစဉ်ကို တပ်မိ ရက်သား ဖြစ်သွားတော့တာပဲ….။
“ တဂိုး” ရဲ့ ကြက်တူရွေး ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုလေးကို တော်တော်များများလည်းဖတ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်…။ စာအံတဲ့ ကြက်တူရွေးလေးသေသွားတော့ ခေါင်းထဲက စာလုံးပုံဆောင်ခဲတွေထွက်ကျလာတဲ့အကြောင်းလေ….။ အဲဒါနဲ့ပဲ ရည်ရွယ်ချက်ပါပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး အပေါ်ကခေါင်းစဉ် တပ်လိုက်မိရော ဆိုပါတော့….။ နေ၀န်းနီတို့ ဆယ်တန်းတုန်းကတော့ သိပ်ညနက်ခံစာကျက်တာကို အိမ်က ခွင့်မပြုပါ….။ ဆယ်နာရီဆိုအိပ်ရပါတယ်….။ မနက်လေးနာရီခွဲ ငါးနာရီလောက်နှိုးပါတယ်…။ အဲဒိမှာ စာကျက်ချင်စိတ်ရှိမှ ကျက်လို့ ပြောတယ်…။ ဟုတ်တယ်လေ…။ စာထဲ စိတ်မပါပဲနဲ့ အသံထွက်ကောင်းရုံလောက်ဆိုရင် ကျက်တဲ့သူကောအနားက လူတွေကော ပင်ပမ်းလို့ပါတဲ့….။ ပြီးတော့ နေ၀န်းနီ ရဲ့စာကျက်နည်းက စာအုပ်ထဲကအတိုင်း ၏ သည် ၍ မလွဲ ကျက်ခြင်းမဟုတ်ရကား စိတ်ပါလက်ပါ ကျက်မျိသာအခါဝယ် အနားကလူကို စကားပြောနေသည့်အလား မာန်ပါလာတတ်ပါတယ်…။ အဲဒိတုန်းက မြန်မာလိုပဲ သင်တာဆိုတော့ (အင်္ဂလိပ်စာကလွဲလို့) စာကျက်ရတာ ဆိတ်ငြိမ်နေတဲ့ မနက်ခင်းစောစောမှာ ဈာန်ဝင်ပါတယ်…။ နေလည်ပိုင်းရောက်တော့ ရေနွေးကြမ်း တစ်ခွက် လက်ဖက်ရည် ပေါ့ကျ တစ်ခွက်နဲ့ စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးချရင်း ကျက်ရပါတယ်…..။ မြန်မာလိုပဲသင်တယ်ဆိုပေမဲ့ နှုတ်ကထွက်လိုက်သမျှ စကားလုံးတွေကို လက်နဲ့ရေးနိုင်ဖို့လည်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်…။ ပြီးတော့ မျဉ်းကြောင်းမပါတဲ့ လျှောက်လွှာစာရွက်ပေါ်မှာ ဖြောင့်အောင်ရေးနိုင်အောင်လည်းလေ့ကျင့်ရပြန်တယ်….။ ကျူရှင်ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်စာရယ်… သချာင်္ ရယ် (ဓါတုဗေဒ+ရူပဗေဒ ) ရယ် ဓါတုဗေဒနဲ့ရူပဗေဒ နှစ်ခုပေါင်းပြီး မေးခွန်းတစ်စုံ ဖြစ်နေတာ အဲ သုံးဘာသာပဲ ယူရတယ်…။ အဲဒိထက် ပိုပြီး ကျူရှင်လိုချင်လို့လည်းမရပါဘူး …။ 1984-85 ခုနှစ် ပျဉ်မနားမှာ အဲဒိသုံးဘာသာပဲ ကျူရှင်သင်ပေးတဲ့သူရှိတယ်…။ နေ၀န်းနီက အထက(၂) မှာကျောင်းတက်ရတာဆိုတော့ အထက (၂) တောင်ဘက်ဘေး ကျောင်းနဲ့မျက်ျနှာချင်းဆိုင်က ဆရာကြီး ဦးလှအောင်ဆီမှာ ကျူရှင်ယူပါတယ်…။ သူက အင်္ဂလိပ်စာနဲ့သချာင်္ သင်ပေးပြီး ကျန်တဲ့ဘာသာတွဲ ကိုတော့ သူသား ကို တွတ်က သင်ပေးပါတယ်…။ ကျူရှင်လခက သုံးဘာသာမှ လေးဆယ့်ငါးကျပ်ပါ…။ ခုခေတ်နဲ့တော့ကွာပါ့ ….။ လွမ်းမယ်ဆိုရင်လွမ်းစရာလေးတွေပေါ့…..။ တွေးနေရင်းနဲ့ အိမ်နားက ညီမလေးတွေစာကျက်သံ ရပ်သွားပြီ….။ မနက်အစောစာ စားဖို့နားတာလား ကျူရှင်ပဲ သွားကြမလား ….။ အင်း ဆက်မတွေးတာပဲကောင်းပါတယ်လေ…..။
ညီမလေးတို့ရေ……… မင်းတို့လေးတွေက စာကျက် တစ်တွတ်တွတ်နဲ့ တဂိုးရဲ့ကြက်တူရွေးလို စာကျက်နေတာဆိုတော့ ကျက်တူရွေးပေါ့ ……။ အိမ်နားမှာ ညည ဂီတာ တစ်ဒေါင်ဒေါင်လုပ်နေတဲ့ ကောင်းလေးတွေကော ဆယ်တန်းပြန်ဖြေဦးမှာတဲ့လား ….။ သူတို့တွေကတော့ ကျီးကန်းတောင်းမှောက်ကြည့်ပြီး ခိုးချကြမယ်နဲ့တူရဲ့ ….။ ကျီကန်း လေးတွေပေါ့….။ ဈေးထဲမှာ အလုပ်ဝင်ရင်း ကျူရှင် တက်လိုက် မတက်လိုက်နဲ့ စာမကျက်နိုင်ဘူး စာတွေက ကျက်လို့လည်းမရဘူး သိပြီးသားတွေဖြစ်ပြီးစိတ်မပါတော့ဘူးလို့ငြီးနေတတ်တဲ့ အလုပ်သမ လေးတွေလည်း ဆယ်တန်းဝင်ဖြေကြဦးမှာ …။ သူတို့လေးတွေကတော့ တစ်ညည်းညည်း တစ်ငြူငြူ နဲ့မို့ ခိုလေးတွေပေါ့ ……။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနက်ဖြန်ဆို မင်းတို့လေးတွေ စာမေးပွဲခန်းထဲဝင်၇တော့မှာ ….။ အဲဒိတော့ မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ မင်းတို့ ရဲ့အဖြေလေးတွေ ကိုက်ညီအောင်ဖြေနိုင်ပါစေ….။ ဘာသာရပ်အားလုံး ပြီးဆုံးအောင်ဖြေနိုင်ပါစေလို့ ………။
၁၀ ဒန်းစာမေးပွဲဆိုလို့ တစ်ခုလောက်တော့ ၀င်ပွားချင်ဗာဒယ်……..
မန်းဒလေး တိုင်းဒေသကြီးအတွက် မေးခွန်းတစ်စုံ…..
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွက် မေးခွန်းတစ်စုံ……
ကရင်ပြည်နယ် အတွက် မေးခွန်းတစ်စုံ…….
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွက် မေးခွန်းတစ်စုံ…..
ရယူလိုသူများကို အီးမေးလ် ဖြင့်ပို့ပေးဗါမည်…….
ဟိုက် ရှာလပတ်ရည် လို့သာအော်လိုက်ချင်တော့ လုပ်စမ်းပါဦး အဲသလိုရလား စာမေးပွဲဒွေသာ ဖြေဖူးနေတာ အဲဒိလိုတော့ ကြိုမရဘူးခဲ့ပေါင်ဗျာ စမ်းကြည့်ရအောင် ပို့ပေးလိုက်ဗျာ
ပို့ပေးလိုက်ဗျာ သာပြောဒယ် ဘယ်ပို့ပေးရမယ်ဂ ညွှန်မထားခဲ့ဘူး……..
သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြေနိုင်ကြပါစေလို့သာ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်.
နောက်ထပ် စာမေးပွဲခန်းထဲက ထွက်လာတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စကားသံလေးတွေကို ခံစားပြီး ရေးကြည့်ပါအုံးလား။
တချို့က မဖြေနိုင်ဘူးလို့ ပြောပြီး ဂုဏ်ထူးအများကြီး ထွက်တယ်။
တချို့က ဖြေနိုင်တယ်လို့ ပြောပြီး အောင်ရုံအောင်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်သေးတယ်။
မိဗုံတို့ ဆယ်တန်းတုန်က စာမေးပွဲရက်တွေမှာဆိုရင် ဘုရင်ဘဲနော် ကိုယ်က မျက်နှာတစ်ချက်အညိုးမခံဘူး လိုချင်တာအကုန်လုပ်ပေးကြတာ အိုက်ဒါကြောင့် စာမွဲကို အောင်ချင်ဘူး မအောင်ရင် အိမ်ပေါ်ကနှင်ချမယ်ဆိုလို့ ကလေးတွေကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေချင်စိတ်ပေါက်နေတယ် ပျော်လို့
ကျက်တူရွေးလိုလည်း နှုတ်တိုက်မကျက်ဖူးဘူး။ (ပျင်းလို့)
ကျီးကန်းလိုလည်း မခိုးဖူးဘူး။ (ကြောက်လို့)
ခို လို လည်းမညည်းဖူးဘူး။ (ဟိ စိတ်မညစ်တတ်လို့။ ကိုယ်မရလို့ ကိုယ်မဖြေနိုင်တာပဲကိုး။)
အဲလာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကကို ပြောတာ။
သာလိကာလို ပဲ စကားများနေတာကောင်းပါတယ်။
ဆရာနီရဲ့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီပေါ်လာတဲ့ အတွေးနဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ်ထားတဲ့စေတနာကို
ဒါကြောင့် ဆရာနီလိုပဲ ၁၀တန်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်
၀ိုင်းပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်….“ဘာသာရပ်အားလုံး ပြီးဆုံးအောင်မြင်အောင်ဖြေနိုင်ကြပါစေလို့ ………။”
စိတ်ပါရင် မနက် (၂) နာရီလောက်အထိ အသံပြဲနဲ့အော်ကျက်… စိတ်မပါရင် ည (၉)နာရီလောက်ကတည်းက ၀င်အိပ်.. ညဘက် ညဉ့်နက်သွားရင် တစ်နေကုန်အိပ်… စိတ်ကြည်အောင်ဆိုပြီး စက်ဘီးတစ်စီးနဲ့ မြို့ပတ်… တစ်ခါတစ်လေ စာတွေမေ့ကုန်ရင် အော်ငို…
အဲ့လို လုပ်ချင်တာလုပ်..ရူးကြောင်ကြောင်..ဂေါက်တောက်တောက် နဲ့ပဲ ဆယ်တန်းဆိုတာကြီးကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်…
(၁၁) နှစ်စာ မေးခွန်းဟောင်းတွေနဲ့ သိပ်အများကြီးမကွဲလောက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကလေးတွေ မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်ပါစေလို့…
ကျုပ် တို့ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေတုန်းက ခင်ဗျားက ကျုပ် ဘေးမှာလေ
ကပေရေ…. လာနောက်မနေနဲ့ နာဘေးမှာ ကောင်မလေးဒွေချည့်ပဲ…။ နာကကောင်မလေးဒွေကြားထဲမှာ
အဘနီရေ စာမေးပွဲကို ကျွန်မ ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ စာမေးပွဲမှာ ရှိရှိသမျှစာအုပ်တွေ အကုန်ယူလာပြီး ကြည့်သင့်ကြည့်၊ ရှာသင့်ရှာပြီး ဖြေသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်နိုင်ဖို့က မေးခွန်း ပညာပါဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ စာတကယ်မတတ်ရင် ဘာမေးလို့ ဘာဖြေရမှန်းတောင်သိမှာမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တတ်တဲ့လူမှ ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာ ဘာရှိပြီး ဘယ်လိုပညာသုံးပြီးဖြေရမယ်ဆိုတာကို သိမှာပေါ့။ အဲလို ဟုတ်ဘူးလား။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို မေးခွန်းတစ်ပြေးညီထားပြီး အဆင့်မြင့်မေးခွန်း သုံးမယ်ဆိုရင် ခလေးတွေ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်သုံးလာရတော့မှာပေါ့ အဲလို ဟုတ်ဘူးလား။ ဘယ်ထဲမှာမှ ခိုးချစရာမရှိ၊ ကိုယ့်ဥာဏ်ကိုယ်သုံးရ မယ့်မေးခွန်းမျိုးလေ။
ဟုတ်တယ်ဆရာမရေ…။ ကျွန်တော်က 1985 မတ်လမှာ ဆယိတန်းဖြေခဲ့ရတာပါ…။ အင်္ဂလိပ်ကလွဲရင်မြန်မာလိုပဲ…။ ဓါတုဗေဒ ရူပဗေဒ ဘောဂဗေဒ သင်္ချာ အားလုံးမြန်မာလိုပဲ…။ သိပ္ပံ ၀ိဇ္ဇာ တွဲရက်ပါ…။ အဲဒိတုန်းက ပညာရေးအဆင့်မမြင့်ဘူး သာပြောကြတယ်…။ ပထ၀ီဝင်နဲ့ သမိုင်းကလွဲရင် Unseen မွေးခွန်းက တစ်ဝက်လောက်ပါတယ်ဗျ…။ ဘယ်အထူးထုတ်ကမှ မတိုးအောင်မေးခွန်းက ထုတ်ထားတာ …။ (အဲဒိတုန်းက ကျူရှင်ခေတ်မဟုတ်ပါဘူး အထူးထုတ်ခေတ် ပါ) …။ ဆရာတစ်ယောက်ကတော့ အထူးထုတ်တွေကိုရှောင်ထုတ်တဲ့မေးခွန်းတွေဆိုပဲ…။ အဲဒိတော့ စာအုပ်တွေယူသွားရင်တောင် အဲဒိမေးခွန်းက တစ်ချို့ဖြေဖို့ခက်ခက်ရယ်…။ ကျောင်းသားတော်တော်များများ ကျော်လွှားခဲ့ ချန်ထားခဲ့ ရွေးခွင့်ရှိရင် တစ်ခြားမေးခွန်းရွေး အဲဒိလိုဖြေခဲ့ကြရတာ…။ ကျွန်တော့အမေပြောနေကြစကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ဗျ…။ ” ဆယ်တန်းဆိုတာနတ်ကြီးတယ်တဲ့ … ငါ့သားတို့တုန်းက တစ်နိုင်ငံလုံးမှ 8% ပဲအောင်တာ နင်တို့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့…။” အမေ့ကို ဘယ်သူကပြောထားလဲမသိပါဘူး …။ ဆယ်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ စကားပြောဖြစ်ရင် သူပြောပြောနေကျ …။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြီးတယ်ဆိုတဲ့နတ်လည်းမတွေ့ခဲ့မိပါဘူး …။ 8% ဆိုတာလည်း ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့လေ………. အဲဒိနှစ်က ပျဉ်းမနားစာစစ်ဌာနက လူ နှစ်ထောင့်ခြောက်ရာကျော်ဖြေတာ အောင်စာရင်းထွက်တော့ စာမျက်နှာ သုံးလေးမျက်နှာပဲ ရှိမယ်…။ ဆရာမပြောသလို ဖြစ်သွားရင် ကျူရှင်တွေ ဘော်ဒါတွေ ရှိပါ့ ရှိပါ့မလားပဲ…။ ဒါပေမဲ့ ဗမာတွေက မဟုတ်တဲ့နေရာ ဥာဏ်ကောင်းပြီးသားပါ သူ့ဟာနဲ့သူ လုပ်စားဖို့ ရှိနေဦးမှာပါပဲ…။
သူ ဆယ်ဒန်း ဖြေဂဲ့ဒါ .. ၁၉၈၅ … ဒဲ့ ….။
ဒီဒေါ့ … ခုချိန်ဂ စပီး နေဝန်းနီ ဆိုဒေါ့ အသင် အား ကျွန်ုပ်မှ …
ဘိုးဘိုးနီ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုဒေါ့မီ ဖစ်ဘာဂျောင်း …
ကြက်တူရွေး ခို ကျီးကန်း ငှက်မှန်သမျှ ကြောင်စာ…. လာခဲ့စမ်း ငှက်ထီးတွေကို သတ်စားမယ်၊ ငှက်မလေးတွေဆို လှောင်အိမ်ထဲထည့် အလှကြည့်ထားမယ်။ :harr:
ဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာ သွားလေသူ ပညာရေးကော်မတီအုတ်ကထဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒင်းစာမေးပွဲ အမှတ်စည်းမျဉ်းလျော့ပေးလို့သာ ကြောင်ကြီး ဆယ်တန်းအောင်၊ ဘွဲ့ရခဲ့တာကလား.. နို့မို့ရင် ဒီတသက် ဘွဲ့ရဖို့မမြင် မမြင်….။ ဒီလိုနဲ့ ရှေ့ဆက်ပညာရေးလမ်း ပွင့်ခဲ့ရတာကလား… ကျနော့် ဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ်မှာ ၄၀နဲ့ နှစ်ဘာသာလားမသိပါသဗျ။ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲတွေမှာလည်း ဖြေနိုင်ပေမဲ့ ၄၀နဲ့အအောင်ပေးလိုက်တာ မြင်မကောင်းဘူး….။ ဘာလို့ဖြေနိုင်ပြောသလဲဆို စပေါ့လိုက်ပြီး ခိုးချထားတာလေဗျာ…။ မပေးမကမ်းနိုင်လို့ ထင်ပါရဲ့ ဂုဏ်ထူးတန်း မတက်ခဲ့ရဘူး။ နေပေါ့ကွာ နင်တို့ဂုဏ်ထူးတန်း မာစတာဘွဲ့ အထင်မကြီးဘူး။ ယူအက်စ်ရောက်တော့လည်း ဆူရှီးလိပ်ရတာပဲ… လခွီးထဲမှ